रचनात्मक विचार: आफ्नो हात "शरद" संग पात बाट Ekibany। एक मूल संरचना कसरी सिर्जना गर्ने
शरद ऋतु यसको आफ्नै मा आउँदा रंगीन हँसिलो रंग संग दुनिया painting, म endlessly खसेको पात rustling, बगैंचामा लक्षविना हिड्नु गर्न चाहन्छु। अब एक सानो शरद ऋतु को मूड राख्न, यो जो यो सिजन प्रशस्त मात्रामा दिन्छ प्राकृतिक सामाग्री देखि आफ्नै रचनाहरूको सिर्जना गर्न सम्भव छ। "शरद" हात द्वारा पात बाट ekibany डिजाइन एक उत्कृष्ट उत्पादन हो। यसलाई मा, पात को शानदार आकारहरू अलग्गै, तपाईं सुकेको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ फूल, तरकारी र फल।
एक गिरावट प्रस्तुत जो सामाग्री को, बच्चाहरु संग संयोजनमा विभिन्न रचनाहरूको बनाउन सक्छ। यो खर्क कच्चा माल देखि बिल्कुल मुक्त लेख हुनेछ, तर आफ्नो मान वयस्क र बाल सम्बन्ध न्यानोपन हुनेछ। विकास हात को ठीक मोटर कौशल, कि बोली, संवेदी क्षमता, कल्पना लागि आवश्यक छ: नैतिक राम्रो बाहेक, यो बच्चाहरु र शारीरिक लागि उपयोगी सोख छ। यो आफ्नो विकास को प्रारम्भिक चरणमा जवान बालबालिकाको लागि विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ।
प्राकृतिक सामाग्री एक सरल र शिल्प बच्चा खेलौना टालो सजावट, herbarium, शैक्षिक संरचना सिर्जना गर्नेछ। उत्कृष्ट शिल्प को ekibany हुनेछ शरद ऋतु पात।
को डिजाइनर द्वारा विकसित वयस्क विषयवस्तुहरू जसको लागि तपाईं रूखहरू विभिन्न प्रजातिका पात को एक मिश्रण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कोठा उत्कृष्ट प्यानल, चित्रहरू र रचनाहरूको, को पर्खालहरु मा राख्नेछ। पूर्ण प्रत्येक अन्य ओखर, मेपल र ओक पात मेल खाँदैन।
सामाग्री को तयारी
ekibanu वा अर्को संरचना बनाउन अघि, सही कच्चा माल तयार महत्त्वपूर्ण छ। यो धेरै तरिकामा गरिन्छ:
तिनीहरूले सुकाउने समयमा मोड छैन भनेर एल्बम र शीर्ष लोड को पानाहरू बीच sandwiched शरद ऋतु पात, थिचिएको छ। बुकमार्क गर्न स्वस्थ, सम्पूर्ण पात चयन गर्नुहोस्। यो प्रशिक्षण विधि herbarium, छोराछोरीको आवेदन वा पात कोलाज को उत्पादन को लागि उपयुक्त छ।
, कुन तल शरद ऋतु पत्ते तीन-आयामी शिल्प र bouquets बनाउन छलफल गरिनेछ, उत्तरार्द्ध एक विशेष तरिकामा व्यवहार हुनुपर्छ। यो घुमा को पत्ते टूट छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न छ, उहाँले supple थियो र आफ्नो मूल उपस्थिति गुमाउनु छैन। यो विधि निर्माण topiary वा suhotsvetnyh रचनाहरूको लागि उपयुक्त छ।
पात - - सही प्रशिक्षण सामाग्री संग शिल्प एक सुन्दर दृश्य राख्ने, र पात को संरचना एक मुड, misshapen, टूट ठूलो परिणत भएन। पछि सबै पात बाट गर्न सकिन्छ समानता गुलाब, cornflowers, carnations, daisies र लिली। रातो वा पहेलो - - उत्पादन एक्रिलिक प्राइमरों संग चित्रित गर्न सकिन्छ brightened र आफ्नो रंग प्राकृतिक मात्र छैन। को जेल को शीर्ष मा ढाँचाको एक किसिम ह्यान्डल लागू गर्न सकिँदैन, र त्यसपछि varnished।
एक बच्चा संग कक्षाहरू: ekibany लागि विचार
मार्गदर्शन रचनात्मकता लागि निम्न विचार प्रस्ताव:
आवेदन। यसको लागि herbarium लागि सूखे कास्टिंग र फूल प्रयोग गर्न सकिन्छ। कागज को एक बाक्लो पानामा रंग र आकार तिनीहरूलाई संयोजन, उपलब्ध सामाग्री विस्तार गर्न आवश्यक छ। जब चाहेको स्थान पुगेको छ, प्रत्येक तत्व गोंद वा PVA fotokleya संग चिपके छ।
विषय मा Ekibany महाविद्यालय "झर्नुहोस्।" यस्तो संरचना फ्रेम अन्तर्गत गरेको छ। गत्ता वा बाक्लो कागजको एक पानामा मा गाढा रंग को ठूलो उज्ज्वल पात को एक पत्र राखिएको छ शीर्ष - सानो र greener, र धेरै माथि - सानो उज्यालो पहेंलो र रातो पात। शरद ऋतु मा मिश्रित, तपाईं प्राप्त, सुकेका फूल थप्न सक्नुहुन्छ तीन आयोमी तस्बिर। र पनि पात र फूल बाट, तपाईंले फरक तथ्याङ्कले राख्नु गर्न सक्नुहुन्छ।
सुन्दर संरचना एक तार संग गत्ता तिनीहरूलाई फिक्सिंग, पात, फूल र पाइन सुई बनेको गर्न सकिन्छ।
पतित शाखा रूखहरू को रूप मा तय गर्दै छन्, र पात र फूल उहाँलाई मिलाएका छौं।
हस्तशिल्प को थोक लागि कच्चा माल को तयारी
प्राकृतिक सामाग्री देखि Volumetric ekibany, "शरद" तिनीहरूले तोड्न रूपमा, को सुकेको पात तह गरेको छैन। त्यसैले, यस्तो कामको लागि सामाग्री विशेष तरिकामा ह्यान्डल छ।
ग्लिसेरिन को 200 एमएल र शुद्ध चिसो पानी 400 एमएल को निर्वाचकगण समाधान गर्न तयार हुनुहोस्।
प्लास्टिक तंग प्याकेजमा सजिलै र बिस्तारै ताजा खसेको पात राख्नु र तयार समाधान तिनीहरूलाई भर्नुहोस्।
सामग्रीहरू संग प्याकेज किनारा hermetically एक गरम चक्कु प्रयोग छाप वा ध्यान वाहिनी टेप संग छाप।
प्याकेज एक सुन्दर गाढा ठाउँमा तीन वा चार दिनको लागि बाँकी हुनुपर्छ, त्यसपछि पात हटाउन र कागज तौलिया धारण सुक्खामा।
लामो प्रकारको मूल, राख्ने र तिनीहरूलाई पात को एक स्टाइलिश र मूल संरचना प्राप्त गर्न विभिन्न आकारहरू को फूल राख्न सकिँदैन, यो विधि पात लचिलो छन् उपचार।
समतल रचनाहरूको लागि सामाग्री को तयारी
त्यहाँ समतल हस्तशिल्प लागि कच्चा माल सुखाने को धेरै विधिहरू छन्:
एक तातो फलाम संग सुखाने। पत्ते र फूल, केही सानो-आकारको सूखे फलाम गिरावट। बाहिर यस कार्यका बोक्न गर्न, कच्चा माल ठ्याक्कै बाक्लो गत्ता decomposed र पुछ्ने कागज ढाकिएको छ। त्यसपछि यो सबै सफासँग चिस्यान वाफ बन्नु गर्न फलाम ironed। फलाम एकदम तातो हुनु हुँदैन।
प्राकृतिक विधि सुखाने। यो विधि लागि, संकलित रंग बन्डलहरूको मा स्ट्याक, वहाँ एक राम्रो वेंटिलेशन छ जहाँ एक ड्राई कोठा मा एक डोरी मा हङ। को tufts inflorescences तल प्रबन्ध छन्। आफ्नो हात संग पात देखि एक सामाग्री ekibany सिर्जना "शरद" मूल प्राकृतिक उपस्थिति हुनेछ।
Duhovochnom मन्त्री सुखाने। यो विधि सुकाउने र ekibany र रचनाहरूको को निर्माण को लागि ठूलो एकल फूल (गुलाब, तुलिप्स, peonies) को तयारी को लागि उत्कृष्ट छ। यो गर्न, ओवन तापमान धेरै, उच्च साठी डिग्री भित्र छैन सेल्सियस र कच्चा सामाग्री, degradable आधारित, यो बिस्तारै dries सेट। यस मामला मा, तपाईं कि फूल खैरो बढ्न थाले छैन ध्यान दिएर सुनिश्चित गर्न, वा आकार बाहिर प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
Volumetric सुकाउने फूल। यो सुकाउने विधि सर्वश्रेष्ठ रंग र पतन रंग ekibany पात समावेश हुनेछ जो देखि प्राकृतिक आकार जोगाउनुहुन्छ। आफ्नो हात गिरावट एक लामो समय को लागि यसरी कायम गर्न सकिन्छ। फूल काटन पछि पूर्व-सुकेको बालुवा मा राखिएको र बारेमा एक महिनाको लागि calcined छ। क्षमता, यो एक तल र राम्रो जाल त्याग दिन योग्य तल भइरहेको बक्स रूपमा सेवा गर्न सक्छन्। यस्तो गुलाब, dahlia वा लिली रूपमा टेरी volumetric फूल भूल-मलाई वा chamomile, छ माथिको stems, तल बालाको र समतल inflorescence, यस्तो asters, buttercup रूपमा फूल बास्केट राखिएको छ। यसरी, इच्छित स्थिति मा फूल समातेर, यो सफासँग बालुवा शीर्षमा छर्कियो स्तरित।
कामको लागि उपकरण
ekibanu गर्नुअघि काम गर्न निम्न उपकरण तयार गर्न आवश्यक:
थप लम्बाइ भन्दा, र बच्चाहरु को लागि - - वयस्कहरूको लागि कैंची गोलाकार सुझाव सानो;
स्ट्याकहरूको - बच्चाहरु र स्टेशनरी चक्कु लागि - वयस्कहरूको लागि;
पातलो टिप र सहज ह्यान्डल संग AWL;
कम गरेको छ, र अगाडि भाग मुड नङ कतरनी - केही भागहरु र तार कस गर्न;
लामो forceps - साना भागहरु लागि;
व्यास शिल्प र खिलौने 0.35 मिमी लागि, पातलो टिकाउ र लचिलो तामाको तार फ्रेम;
पन्नी कागज र सजावट लागि पन्नी;
मुद्दा र एक सिलाई सुई - बन्धन भागहरु र bouquets लागि।
पातहरु देखि आफ्नो हातले सिर्जना गरिएको थियो ekibany गर्न, "शरद" सामाग्री आवश्यक हुन सक्छ छन्:
विभिन्न मोटाई, रंग र कागज प्रकार (वालपेपर, नालीदार, चर्मपत्र, मखमल, प्रतिलिपि, लपेटन र परिदृश्य) को घनत्व;
बहुलक रंग माटो र माटो - को रचनाहरूको मोल्डिंग लागि थप भागहरु;
BF गोंद PVA वा "मंगल";
ब्रश र gouache वा रंग सामाग्री र रचनाहरूको विमान लागि उपयोगी Watercolors;
काम आवश्यक नरम लोखर्के ब्रश र एक्रिलिक पेंट्स को मात्रा लागि।
शरद ऋतु को खसेको पात देखि गुलाब
"शरद" मा Ekibany मूल र stylishly यसको संरचना यस्तो फूल, एक गुलाब जस्तै वर्तमान हो भने, भित्री सजाउनु। स्वतन्त्र सजिलै यो सम्भव बनाउन।
ठोस म्यापलकापात, बलियो मुद्दा, सूर्यमुखी तेल र सुनको रंग संग रचनात्मक काम हुनेछ। पत्ते एक Glycerol समाधान माथि व्याख्या जो संग pretreated।
म्यापलकापात देखि गुलाब ठूलो बाहिर बारी, त्यसैले फूलगुच्छा बारेमा पाँच सात तिनीहरूलाई को पर्याप्त हुनेछ। पत्ते नै मेपल सेवा गर्नेछन्।
आफ्नो हात "शरद" संग पात बाट Ekibany निम्न अनुक्रम मा प्रदर्शन गरिएको छ:
मेपल आधा रोल मा outwards अनुहार र मोड मा जोडेको।
कली नै रंग को दोस्रो आधार मेपल सम्मिलित।
दोस्रो पाना कली, को गठन फूलको दल त-गुलाब obkrutit।
अर्को, अर्को मेपल लिन र अफसेट संग सञ्चालन दोहोर्याउनुहोस्। अधिक के ती पत्रदल गुलाब, फूल bulkier हुनेछ। एक blossoming फूल को प्रकार को लागि प्रत्येक पृष्ठ तपाईं एक सानो कम सार्न गर्न आवश्यक छ।
अलिकति उच्च petioles शिल्प सुरक्षित मुद्दा - पहिलो फूल तयार छ।
पाँच सात यस्तै फूल उत्पादन।
को उपस्थिति संरक्षण गर्न - चिल्लो मेपल गर्न सुन रंग संग गुलाब सूर्यमुखी तेल र आवरण।
अन्तिम चरण मा तपाईं एउटा सानो पट लिन केही म्यापलकापात मा राख्न आवश्यक र तिनीहरूलाई बीच त्यहाँ गुलाब फूलगुच्छा को रूप मा बनेको छ। तयार Ekibany र कृपया एक लामो समय को लागि हेर्न हुनेछ।
म आफ्नो हातले एक अचेत बन्दूक बनाउन सक्छ?
कसरी घर मा आफ्नो हातमा इन्धन छर्रहरुमा बनाउन
कसरी आफ्नो हात संग सीढी छ।
ब्याटिङ टाइल्स को मोशाको, आफ्नो हात बाहिर राखे
माउन्ट बिजुली चिमनी Sami: डिजाइन मा कृत्रिम पत्थर
कसरी आफ्नो हात संग दोस्रो तलामा एउटा काठको सिँढी निर्माण गर्न
बाल गहने: साटन रिबन को आफ्नो हात धनुष
सरकार कसरी गर्छ? यसलाई गोप्य वा छैन?
साइट अनुकूलन के छ र यसको लागि के हो?
खेल Spore: सिस्टम आवश्यकताहरु र विवरण
बस जटिल बारेमा: कम्पनी को creditworthiness को विश्लेषण
रूसी हकी खेलाडी Nikita Kucherov: खेल मा जीवनी र क्यारियर
तपाईं पाल्मा को ठाँउहरु थाहा छ?
यो पेशामा के सुविधाहरू मास्को मा अर्थशास्त्री को काम समावेश?
कार "KamAZ": वर्णन, विशेषताहरु मोडेल
गैर-दहनशील इन्सुलेशन। यसको प्रकार र आवेदन को सुविधाहरू